Na egwuregwu nke ruleti Club, gị mkpa iji akpa ogho a bọl on a wheel nke nwere 37 ohere mpere. Na na obi ụtọ na-akwụsị na onye ọ bụla n'ime ndị ohere mpere mgbe akwụsịtụ nke wheel. The isi ebumnuche nke table egwuregwu bụ nke ọma maa nke oghere na obi ụtọ ga-akwụsị. Site n'ime nke a, a payoff na-akwụ on your eto. The payoff size dịgasị na ụdị nke eto enịm. Nke a bụ otu n'ime ụwa kasị mma ndụ dealer table egwuregwu. LIVE Egwuregwu NchNhr isi ga-ahọrọ ịgbanwe ruleti table ma ọ bụ họrọ ụfọdụ dị iche iche ndụ egwuregwu. The Live Dealer Button na-enye ohere ka ị na na ọtụtụ ndị ọzọ na egwuregwu n'oge gameplay.
Banyere Developer nke Club ruleti
Nke a egwuregwu a kwadoro site na NetEnt. NetEnt ka mgbe nwee enwekwukwa ọrụ interface ya Player ebe ọ bụ na 1996. The nnukwu ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ bụ n'ihi na egwuregwu mepụtara ya bụ n'ezie ndị pụrụ iche na mmata niile egwuregwu-enweta n'ebe ọ bụla na oge obula - mobile, retail ma ọ bụ nelu ihuenyo - nke kwe gị na-enweta ọnụnọ nke a multi-ọwa ụlọ ọrụ.
Ị ga-ama maara ewu ewu na nke table egwuregwu na ma ala dabeere na online cha cha industries. Mgbe ị na-ahọrọ na-egwu ruleti Club, ị ga-enwe a ndụ n'ezie ahụmahụ nke a n'ala nke dabeere cha cha.
Họrọ kwesịrị ekwesị eto on a nyere atụ ogho site n'ịhọrọ kwesịrị ekwesị ịkụ nzọ ubi na egwuregwu table. The 'Total nzọ' window-egosi na ngụkọta nzọ. Ị nwere ike ikwugharị stakes enịm na aga na egwuregwu site na ịpị megharịa button. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ndị megharịa button maka gara aga gburugburu si nzọ, mgbe ahụ nzọ ga-okpukpu abụọ. Ị nwere ike idowe ọtụtụ nzo na ruleti table. Ụdị nzọ-ekpuchi a pụrụ iche elu ugwu nke oghere nọmba na a kpọmkwem payoff na-enwetara site ọ bụla ụdị eto. The osisi nwere ogidi na e nyere ahịrị si nke ogidi nwere ndị 12 agukọta aba edoghi ma ndị ahụ e nyere ahịrị ndị na- 3 agukọta obere edoghi. The n'ime nzo a table egwuregwu na-1st ise iche iche nke stakes. Ị nwere ike idowe n'ime nzo na agukọta ohere mpere. The n'èzí nzo bụ nke ikpeazụ 3 ụdị nzo na i nwere ike idowe ndị a na pụrụ iche igbe chee n'okpuru.
ruleti Club a na-ewere dị ka na ezigbo ndụ dealer ruleti egwuregwu na-apụta site NetEnt. The zuru okè elu-edu ndịna-emeputa na-eju onye ọrụ interface ịrịọ na-ege ntị.